Teny fito : (5) – filazantsaramada
Teny fito : (5)
Publié parfilazantsaramada	 mai 23, 2012 mai 23, 2012 Laisser un commentaire sur Teny fito : (5)
« Mangetaheta Aho » Jaona 19:28
Teny nataon’i Jesosy tamin’Izy teo amin’ny hazofijaliana koa io. Ny miteraka ny hetaheta eo amin’ny olombelona dia ny fisian’ny filana eo amin’ny sela, izay mitady rano isan’andro, koa raha vao tsy ampy io dia tonga ny filana izany rano izany. Nangetaheta Jesosy, ny sela ao aminy dia mitady rano. Miharihary eto ny maha-nofo an’i Jesosy. Izay mihatra amin’ny nofo rehetra dia mihatra aminy koa.
Raha hetaheta no resahina dia rano no tena tadiavina: Raha zavatra mamy, na masira no asolo ny rano dia tsy mahahafaka ny hetaheta. Tsy fantatsika na efa hafiriana ny Tompo no tsy nisakafo na nisotro rano talohan’io. Teo ny zava-mafy rehetra nianjady taminy: na ara-nofo na ara-panahy. Nila hery ny vatany, nila sakafo, nila hery Izy. Toa nitady fampaherezana Izy; noho ny maha-nofo Azy dia nitady izany Izy. Toa misy fifandroritana ny maha-Andriamanitra sy ny maha-nofo an’i Jesosy eto.
Ny maha-Andriamanitra Azy dia ampy tanteraka ho Azy ny zavatra eo aminy, ny maha-nofo Azy dia izao main’ny hetaheta izao. Io dia tonga amin’izay nambaran’i Jesosy ihany ny amin’ny tokony hiharetan-tory amin’ny vavaka: « Miareta tory sy mivavaha hianareo mba tsy hidiranareo amin’ny fakampanahy; mety ihany ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery. » Matio 26:41 . Mitady rano ny Tompo, main’ny hetaheta Izy. Tandindon’ny Fanahy koa io, satria ny tenantsika dia Tempolin’ Andriamanitra.
Ny maha-nofo ny Tompo dia nitady famonjena Izy. Ny mahagaga dia vinaingitra no natolotry ny olona Azy ho solon’ny rano. Tsy rano no nomen’ny olona ny Tompo fa vinaingitra, ny Tompo izay efa niharitra ny hanohanana sy ny hetaheta fotoana ela. Voalaza fa taorian’izay vinain gitra izay dia nanondrika ny lohany Izy ka nanolotra ny fanahiny. Maty ny Tompo. Ny nofon’ny Tompo nangataka rano ho famonjena, fa vinaingitra nitondra fahafatesana no nomen’ny olona: raha amin’izao tontolo izao no mangataka famonjena isika dia izao hitantsika izao no valina! Fahafatesana!
Soa ihany, fa ny fahafatesan’ny Tompo no endriky ny fahafatesan’ny fahotantsika; niara-novonoina tamin’i Jesosy Kristy ny fahotantsika!Tsy nijanona teo anefa ny tantara fa: Nitsangana tamin’ny maty ny Tompontsika. Andriamanitra no nanolotra Azy ny Rano velona miboiboika, dia ilay Fitsanganana amin’ny maty nitondra fandresena ho an’izao tontolo izao. Koa izay rehetra misotro amin’izany rano izany, no tsy hangetaheta intsony; Rano mitondra fahavelomana mandrakizay fa tsy vinaingitra hitondra fahafatesana ho anao mandrakizay.
Azo antoka ny fanomezana avy amin’ny Tompo Jesosy! Ankehitriny Izy dia miantso anao hisotro amin’ny Rano velona hitondra fahavelomana ho anao, aza mety ho voafitaky ny vinaingitra atolotr’i Satana anao ho valin’ny hetahetanao. Raiso ny Fanomezana sarobidy atolotra anao, Sotroy ny Rano velona omena anao!
Hitsangana miaraka Aminy ianao!
Ho resy ny fahafatesana, fa ho velona miaraka amin’i Jesosy ianao ka ho Paska vaovao ho anao indray izao Paska izao!
Publié parfilazantsaramada mai 23, 2012 mai 23, 2012 Publié dansUncategorized
Teny fito: (4)
Teny fito: (6)